Ihe karịrị n'ọnụ ọgụgụ nke ndị music-arọ niile oge nọrọ ha dum ndụ raara nye okè nke ha masterpieces na egwú nkà. A na-aga a ogologo ụzọ na-ekwu na-akpali tinyere na a ike dose nke talent jikọtara na raara onwe ya nye omume bụ a surefire Ntụziaka nke ọma. Ndepụta nke music-arọ nyere n'okpuru na-agba akaebe na ndị dị otú ahụ a ịrụ ọrụ.
Part3. Ludwig van Fernandes:
" Part9.Georg Friedrich Handel
Part19. Ala Rọshịa bụ Dmitri Shostakovich
Mụrụ na 1685, Bach bụ a German dere, na-abụ abụ na organist. Na afọ nke 51 Augustus III nyere ya aha nke "Royal Court dere". Ahụ ike ya na ọhụụ okpu ke ya na mgbe na ọ nwụrụ na 1750. ya ikwọ agụnye
Abụọ agụụ mmekọahụ
The Nkume ke B Minor
The Goldberg ọdịiche
The mepụtara na Symphonies
Na-agba egwú oke ime ụlọ
Overture na French Style
A vasatail dere, Mozart a mụrụ na Salzburg na 1756 na ekewet n'elu 600 ọrụ. Ya music guzo dị ka ihe archetype nke oge gboo ịke. The ọnọdụ nke mbụ ya ọnwụ omimi inye ịrị elu na ọtụtụ akụkọ ifo. Ụfọdụ n'ime ya kasị amasị ọrụ
The Magic ọjà
K. 595 na B-ewepụghị
Afụrụ concerto K. 622
K. 614 na E-ewepụghị
The obi ike Ave verum corpus K. 618
Emechaghi Requiem K. 626
Motet Ṅụrịa ọṅụ,-enwe obi ụtọ, K. 165
3) Ludwig van Fernandes:
Fernandes-atụle ga-kasị ama na-akwanyere ùgwù-arọ niile oge. Enye akamana ke 1770 na afọ iri gara aga nke ndụ ya tụgharịa kpamkpam ntị chiri ma ekewet kasị amasị nke ọrụ ya niile. Fernandes kasị ama compositional ọrụ ọrụ na-agụnye
Mbụ na nke abụọ symphonies
A German dere, nkiri director na a eduzi, Richard Wagner si Tristan na Isolde na-ahụta ka mmalite nke oge a music. Enye akamana ke 1813, a họpụtakwara ya Royal Saxon Court eduzi mgbe o bi na Dresden. O dere, sị ndị na-esonụ usoro ihe nkiri
Joseph Hayden bụ nwe obodo Ọstrịa dere onye a mụrụ na 1732 na nọrọ ukwuu nke ya ọrụ ndụ dị ka a ikpe egwú Esterházy ezinụlọ. Ọ bụ nwanne Michael Haydn, na Johann ọkwọrọikọ Haydn, a ezi enyi nke Mozart na onye nkụzi nke Fernandes. Ya n'ịgba n'oge ọrụ
Chineke ịzọpụta Francis Eze Ukwu
Ọkà ihe ọmụma mkpụrụ obi
Johannes Brahms a mụrụ na 1833 na bụ ihe nkwụsi-achọkarị izu okè ruru ka ndị nke ọtụtụ n'ime ọrụ ya e bibiri na ndị ọzọ na bipụtara. O nwetara ewu ewu mgbe ya premiere nke A German Requiem nke nyere ya ezuru obi ike iji wuchaa
Afụrụ Trio, op. 114
Afụrụ Quintet, op. 115
Afụrụ sonatas, op. 120
Iri na otu Chorale Preludes
Piano iberibe, Opp. 116-119
Akpa eriri quartet
Nke atọ piano quartet
A Hey nwe obodo Ọstrịa dere, Franz Schubert a mụrụ na 1797 ma nwụọ mgbe ọ dị nnọọ obere nke 31 na-eli-esote Fernandes onye ọ enwe mmasị n'ebe ukwuu. Tributes e kwụrụ ọtụtụ ukwuu acclaimed egwú a nkà andiwet onye ọrụ na-agụnye
Nkume ke A-ewepụghị isi
The Symphony na B-obere
Anwụ Schöne Müllerin
Sonata na A obere
Octet na F isi
Entertainment bụ Hungarian
Eriri Quartet na A obere
Robert Schumann bụ a German andiwet onye na-akasị-asọpụrụ dị ka ndị kasị ukwuu-arọ nke Ihunanya oge. Ruo mgbe ọnwụ ya na afọ nke 46 Schumann rụsiri ọrụ ike, passionately ike ụfọdụ ndị kasị mma mejupụtara ebi. Na-esonụ bụ n'etiti ndị ya kasị ama.
Album maka Youth
Ebe ekewet karịa 40 usoro ihe nkiri na ya ndụ Handel bụ nke ọma mara maka ya oratorios, anthems na ngwa concertos. Otú ọ dị, ọ dịghị mgbe ọ rụrụ ihe Italian opera mgbe ya giddy ịga nke ọma na Messiah. Ya kasị ama ọrụ nke Baroque oge na-
Music maka Royal ezimezi oku
Zedọk onye nchụàjà
Ka m na-akwa ákwá
Ultrecht Te Deum na Jubilate
Ọ bụ ezie na a Russian dere, Tchaikovsky mgbe nweela ude n'etiti ndị Russia n'ihi na ha na-ekwu na ya music e metọworo Western mmetụta. Otú o sina dị ya oké ọrụ na ikwọ dị ka ndị na-esonụ anọgide na-eji maka egwuregwu music n'ụwa nile.
Vakula na Smith
Ọdịiche na a Rococo Theme
Mandelssohn bụ taa kwetara dị ka ndị kasị ewu ewu na-arọ nke Ihunanya oge. Ọ tọrọ ntọala Leipzig Conservatoire Nke ahụ bụ ugbu University nke Music na Theatre Leipzig. Ọ bụ ya bụ nwa nwa nke ama ọkà ihe ọmụma Moses Mendelssohn, Ya kasị mara amara ọrụ na-agụnye
Songs enweghị Words
The eriri Octet
Overture A N'etiti ọkọchị Night si Dream
Overture ka Ruy Blas
The Homecoming AUD ná mba ọzọ
Alụmdi na Nwunye nke Camacho
Dvorak bụ a Czech andiwet onye a mụrụ na 1841. Ọ bụ prọfesọ na Prague Conservatory. Ya kasị aga nke ọma ụlọ music iberibe, Dumky Trio, duru ya ịkwaga US-aghọ nduzi nke National Conservatory nke Music nke America na New York City. Ọ na-mara maka ndị na-esonụ.
Songs Nne m kụziiri m
Site New World
American eriri Quartet
Liszt bụ a Hungarian dere bụ onye nke ọma n'ihu nke ubọchi-ya ya elu ma na-oru ihe ọmụma dị ka a pianist. N'etiti ndị ya ọtụtụ legacies bụ ya mepụtara nke symphonic poems ma ọ bụ ya onyinye-ya. Ọ bụ ezie na a ma ama pianist ọ na-ghọtara maka ndị na-esonụ ọrụ.
Angiolin si blond tresses
Book nke Songs
-Amasị m ịpụ n'ebe otu ụbọchị
Site kredul Shiol
The mwute mọnk
The n'Isi Iyi nke Vila d'Este
Olili ozu March, na ebe nchekwa nke Maximilian
Chopin a maara dị ka a virtuoso pianist nke Ihunanya oge ma ọ họọrọ chiri anya karịa Ụlọ Mmanya ikuku. Ọ bụ ezie na a mụrụ Polish na 1810 ọ nwetara French ụmụ amaala na afọ nke 25. A ọgụgụ ka ukwuu nke ya ikwọ ndị ahụ bụ maka solo piano nke na-agụnye
Stravinsky bụ a dere, pianist na a eduzi ndị e ọdịda nke Royal Philharmonic Society Gold Nrite 1954. Ọ emewo meriri ọtụtụ Grammy awards gụnyere a ndụ nweta mgbe ọ nwụsịrị. O so immensely n'oge ya ọrụ ndụ. Ụfọdụ ọwọrọiso ọrụ
The zaa si Ọganihu
Verdi bụ ihe Italian dere opera. Ya egwú mmetụta ya na-anọchi bụ ókè. Otú ọ dị, atọ Italian conservatories na-aha ya mgbe ya na ya na usoro ihe nkiri na-emekarị haziri gburugburu ụwa. Ọ bụ ezie na adịghị mma site ọtụtụ ndị dịkọrọ ndụ na-akatọ ya na-esonụ usoro ihe nkiri na-soro popularly.
Mahler bụ nwe obodo Ọstrịa dere onye bridged nke 19 na narị afọ nke 20 n'ụdị nke music n'etiti Austria-German omenala na modernism. Ọ nọrọ ikpeazụ ya afọ ole na ole dị ka onye nduzi nke New York Philharmonic na New York si Metropolitan Opera. Ọrụ ya na ya ikpeazụ afọ ndị ọwọrọiso ụfọdụ nke bụ:
The Ninth na nke iri Symphonies
The Ruckert songs
Songs nke a Wayfarer Gas Ellen song okirikiri
Abụ nke ákwá arịrị
Lieder na song
Prokofiew bụ a Russian dere, pianist na-eduzi onye bụ nnata nke ọtụtụ enọ gụnyere isii Stalin Nrite na Lenin Nrite na onyere mgbe ọ nwụsịrị. N'oge ya ọrụ ndụ Prokofiew emepụta ndị na-esonụ ọrụ nke mere ka ya a isi andiwet narị afọ nke 20.
The March si The Ịhụnanya atọ oranges
The ụlọ Lieutenant Kije
The balet Romeo na Juliet
Pita na Wolf
The ịgba chaa chaa
The Ọkụ Angel
Asaa, ha na-asa
19) ala Rọshịa bụ Dmitri Shostakovich:
Shostakovich bụ a Russian dere na a ma ama pianist narị afọ nke 20 bụ onye nwere agba aghara mmekọrịta ndị ọchịchị nke Soviet Union. Ọtụtụ enọ e nyere ya gụnyere Lenin na Stalin nwa anụmanụ. Ọrụ ya na-agụnye ndị dị otú ahụ dị ka masterpieces
Lady Macbeth nke Mtsensk District
Suite na Finnish Gburugburu
Si ndị Juu Ndiife Poetry
The agba chaa chaa na
Okwu Mbido na opera "Orangutan"
Strauss, German dere, bụ onye kasị ukwuu n'ubi ya n'oge ya ndụ site 1st ọkara narị afọ nke 20. Mụrụ na 1864, nke a dere mara maka ọrụ ya na usoro ihe nkiri nke ụfọdụ e weere controversial na ụfọdụ ndị ọzọ rụrụ arụ. Ụfọdụ n'ime ya ndị ọzọ a ma ama usoro ihe nkiri bụ
Ọnwụ na Nnwogha
Ruo Eulenspiegel si Adịkwa Pranks
A dike si Life
Berlioz a mụrụ na 1803 na bụ French andiwet onye isi onyinye bụ ya ikwọ Symphonie fanatastique na Grande Messe des morts. Ọ na-ewu ewu bụ ndị n'oge ya ndụ, Otú ọ dị, n'oge bicentenary mụrụ ya ya na-esonụ na ọrụ enyịme.
La damnation de nwetaghachi
"Dị Ịrịba Ama nchịkọta egwu" Romeo na Juliet
The Roman ejị
Debussy bụ a French andiwet onye e jikọtara ya na impressionist music. O nwetara ama ya kpochapụwo na mbụ mpempe akpọ buteere a l'après-Midi d'un faune. Ndị na-esonụ ọrụ n'oge ya ọrụ ndụ guzosie ike ya dị ka ndị na-eduga-arọ nke ya oge.
N'ihi na piano
Reflections na mmiri
Puccini setịpụrụ na eluigwe na ala ụkpụrụ maka usoro ihe nkiri. Ọ bụ Italian andiwet onye mepụtara ya na-arụ ọrụ verismo ịke. The American-agụ egwú na director Harry Dunstan guzobere American Center maka Puccini ọmụmụ ke 2004. Ya kasị ama ọrụ na-na-esonụ:
Akụkọ Mgbe Ochie nwere ya na Palestrina, bụ onye Ịtali dere dị nsọ music, e weere na-'Nzọpụta nke Church Music'. Mụrụ na 1525 ọ nọrọ ọtụtụ ná ndụ ya na Rom. O dere 105 pụta, 68 offertories na 140 madrigals. Ụfọdụ n'ime ya dị mkpa ọrụ na-na-esonụ.
Tus es Petrus
Ave Maria, natara chọọchị ikike ibi plena
Ugbu a, ka ohu gị
-Atụle ga-"ọkara simpleton, ọkara Chineke" n'adịghị egwú ndị ọzọ radicals, Bruckner bụ nwe obodo Ọstrịa dere bụ onye e ukwuu mmasị n'ebe ụdi-arọ. Ndị Nazi ike mma nke ya music. Ya na-esonụ ọrụ na-egosi na okpukpe ya fervor.
Ntọala nke ise Abụ Ọma
Asatọ ntọala nke Tantum ergo
Atọ ntọala nke Kraịst wee rube isi n'ihi na anyị
Atọ ntọala nke Ave Maria
Telemann, a German dere na multi-instrumentalist kwuru na ịtọ nweela nke na-achụ nanị n'akwụkwọ ikike na n'ịtụle egwú ọrụ dị ka onye dere ọgụgụ isi ihe onwunwe. Ya ndepụta nke kasị ama usoro ihe nkiri na-agụnye ndị na-esonụ:
Ferdinand na Isabella
Jupiter na Semele
Anwụ Satyren na Arcadien
Saint-Saens, a French andiwet mụrụ na 1835, e mere ka a Chevalier nke Legion nke Honor na afọ nke 32 na ama okpono na British Victorian Order na 1902. Ọ ekewet ọtụtụ kasị mara iberibe na ndị instrumental na-eke a dum ọhụrụ genre nke music. Ha na-agụnye:
The ejị nke Animals
Henry nke Asatọ
Sibelius bụ a Finnish violin na andiwet onye ọrụ mepụtara a echiche nke mba njirimara na Finland. Ebe ọ bụ na 2011 Finland ka na-eme ememe 8th December dị ka a Flag Day na-echeta ya ụbọchị ọmụmụ. Tụkwasị na nke ya symphonies, ya kasị mara ikwọ agụnye ndị na-esonụ.
The Swan nke Tuonela
Virgo The ụlọ elu
Ravel bụ a French dere, pianist na a eduzi onye e-ejikọta ya na impressionism. Ọ na-nnọọ nke ọma na-akwanyere ùgwù n'etiti ndị ya na ha dịkọrọ ndụ. Ọ na-amara na ha jụrụ ọtụtụ enọ gụnyere Legion d'honneur na ihe niile ala ukpono si France. Ya a ma ama ọrụ ndị na-esonụ.
Foto na ihe ngosi
Adelaide ma ọ bụ asụsụ nke okooko osisi
Rossini bụ ihe Italian dere bụ onye e weere na-kasị ewu ewu opera dere ruo mgbe ya ezumike nká na 1929. O dere, sị 39 usoro ihe nkiri, ụjọ music na ụlọ music. Rossini bụ Ukwu Officer nke Legion nsọpụrụ. Ya kasị ama ọrụ na-agụnye ndị na-esonụ.
The Barber nke Seville
Moses na Fero
Ọnụ ọgụgụ nke silk
Aureliano na Algiers
Ọ bụ eziokwu na ndị egwú ọrụ nke ama-arọ nwere guzogideworo ule nke oge. Ha nwere site n'oge immemorial e-asọpụrụ na dị ka ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị masterpieces nke ndị a artists. Gịnị bụ dokwara na-akpali ma ịrịba ama bụ na-anọghị nke otu nwanyị na-ese n'etiti n'elu 30 music-arọ. Nke a ikekwe nwere ike ghara ịbụ music ka ọtụtụ ndị ntị. Otú o sina dị, nke a na ọ dịghị ụzọ ego na mastery imezu site n'elu kwuru banyere music-arọ.
> Resource> Music> Top 30 Music arọ na ha Famous Oge gboo Music